Mahaiza mandanjalanja, vidin'ny GPS santimetatra
Ity vokatra ity dia natolotra tao amin'ny Konferansa ho an'ny mpampiasa ESRI any Espana, tamin'ny herinandro lasa teo ary ho avy izao ao amin'ny TopCart any Madrid izy ireo. Izy io dia rafitra fametrahana sy fandrefesana GPS izay manohana ny fanodinana aorian'ny fandrefesana, izay ahazoana ny mari-pahaizana centimeter. Tsy misy tsy ataon'ny hafa ...
Field MobileMapper vaovao ary MobileMapper Office
Tamin'ny volana Jona 2011, navoaka ireo kinova vaovao an'ny rindrambaiko ampiasaina amin'ny fitaovan'ny Ashtech, ka rehefa mividy fitaovana vaovao dia azo antoka fa tsy hapetraka ireo kinova ireo. Manararaotra an'ity lahatsoratra ity aho mba hanondroana hoe aiza no ahazoana misintona azy ireo, ary koa ireo fiasa farany vaovaon'ity fanavaozana ity: Amin'ny tranga ...
Zonum Solutions dia tranonkala iray izay manolotra fitaovana novolavolain'ny mpianatra iray tao amin'ny University of Arizona, izay tamin'ny fotoana nanokanany azy dia natokana amin'ny famoahana lohahevitra mifandraika amin'ny fitaovan'ny CAD, ny sarintany ary ny injeniera, indrindra amin'ny fisie kml. Angamba ny nampalaza izany dia ny nanolorana azy ireo maimaim-poana, ary na dia ...
Cartografia, Google Earth / Maps, GPS / Fitaovana, Engineering
Ny famelarana an-tanandehibe, lohahevitry ny 2011
Ny olana ara-demografika dia hivoaka amin'ity taona ity - ary ny manaraka - satria tsy dia misy zavatra azo atao hamahana ny vahaolana manerantany. Ny fifantohana ho an'ny National Geographics amin'ity taona ity dia ny mponina eran'izao tontolo izao alohan'ny fanitsiana hatramin'ny 7 miliara. Ny laharana Janoary dia kilasin'ny mpanangona. The ...
Cartografia, Google Earth / Maps, fanavaozana
Farany izahay dia niresaka momba ny mason-tsivana sasany maninona MapServer sy ny fototry ny fametrahana. Andao hojerentsika ny sasany amin'ny asany amin'ny fampiharana miaraka amin'ny sarintanin'ny cuad Chiapas. Aiza no hametrahana azy rehefa apetraka Apache, ny lahatahiry famoahana default ho an'ny MapServer dia ny folder OSGeo4W eo ambonin'ny C: / Inside, misy ...
Google Earth samy hafa GIS mapserver shp
Ny GPS Promark 3, ny Fiheveran'ny Olona Ahy
Efa nalaiko avy tao anaty boaty ireo kilalao ireo, afaka herinandro dia hanao fiofanana izahay hahitana ny fomba fiasan'izy ireo. Amin'izao fotoana izao, zara raha nahita ireo horonan-tsary sy ny sasany amin'ireo toetrany aho. Mpialoha làlana ny Promark 3. Ao amin'io lafiny io ihany, nisy teo aloha ary mbola misy ny farany: The Mobile Mapper Pro, kilalao mahafinaritra iray manodidina ...